Ọ dị mma iwepụ otu izu n'ọrụ gị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-ewepụ otu izu ịhapụ ịrụ ọrụ - nkọwa zuru ezu
Na-ewepụ otu izu ịhapụ ịrụ ọrụ - nkọwa zuru ezu
Ọ dị mma iwepụ otu izu n'ọrụ gị?
Na-ewere aizu izusite na ibuli agaghị ebibi akwara gị, afọ nke uru ọrụ siri ike dị mma. Ọbụna ọ nwere ike inye aka site na ikwe ka ọnyá na-egbu mgbu gwọọ gị. Oge a bakwara uru maka akwara arụ ọrụ na ịrụ ọrụ gabiga ókè chọrọ oge ezumike na ọgwụgwọ.Ọgọst 23 2019
Gbagoonu Ya mere, m na-alọta LA m laghachi n'ime Ọ n'ezie abụghị ihe ọjọọ, anwụ na-acha na London nwere nnukwu oge onye ọ bụla bịara nzukọ na-ekele gị nke ukwuu. Obi dị m ezigbo ụtọ.
Enwere m mgbede kachasị mma. Ebere m ákwá nke ukwuu ugboro abụọ Ndo m abụ onye nwere mmụọ nke ọma Aha gị, ejiri m izu abụọ na LA ka m wee chee na m ga-ewe izu abụọ wee jiri nke ahụ mee ka ntọala m dịrị na Azụ obere obere ezi mana mgbe ị na-ele ụzọ nke ọzọ ma na mbido m zigara ụfọdụ usoro mgbatị m were nkeji 10 wepụta mgbatị ahụ ma nwa okorobịa ahụ kwuru chere ka m dị, ee ọ bụ naanị ihe a dị egwu. Echegbula onwe m, Achọrọ m ịlele maka mgbanwe mgbanwe ahụike na ahụ m nke mere n'ihi enweghị mmega ahụ ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị.
Nye m nnukwu aka gị wee pịa bọtịnụ Idenye aha. Ma oburu na odi, achoro m ịmakụ gị, i meela. Ọ dị mma.
Ka m kwuo ya n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ihe atọ, ogo ahụ na uru ike abụba, na nke atọ, naanị ndụ gị na omume gị ga-abụ n'ihi enweghị mmega ahụ, ị ​​maara ihe m kwuru maka abụghị na-emega ahụ. Ana m ekwu banyere gị Naanị ịmeghị mgbatị ahụ gị.. ka na-eme ihe ị ga-eme kwa ụbọchị na ụbọchị, ndụ na-abanye n'ụzọ ma ọ bụghị akwa ụra n'ihi na mgbe ọ ka mma, mgbe ọ na-eme nnukwu mgbanwe, ọ bụghị dị ka m Broke ogwe aka na mgbe izu abụọ gasịrị mgbe m wepụrụ ya n'ihe a ọ bụ ihe ọ ga-adabere na onye ị bụ.
Yabụ mkpụrụ ndụ ihe nketa gị, okike, afọ, ogo ọrụ, mana anyị ga-ekwu maka sayensị n'ozuzu ma ị nwere ike ịnwe otu ị nwere ike isi metụta gị. Yabụ n'ihe gbasara atrophy muscle, nke bụ mgbu ahụ. Ahụ ike gị na-adịwanye obere ma enweghị nnukwu nyocha ọ ga-emechi.
Ọ na-esiri gị ike ịchọta ndị na-ebi ndụ amamịghe ma na-arapara na usoro iwu, mana enwere ihe abụọ anyị maara gbasara ndị na-eme ọzụzụ nguzogide. Ya mere, mgbe ị nọ n'ụgbọ okporo ígwè dị ogologo ahụ, ị ​​na-akpata nchekasị n'ahụ gị ma ọ nwere ike ịkpata ọzịza na akwara gị, nkwonkwo na akwara na ọbụlagodi mgbe ị na-emega ahụ, ị ​​nwere ụlọ ahịa glycogen buru ibu nke bụ kpọmkwem ihe nke gị Akwara jiri ya maka ike , na glycogen a na-echekwa gburugburu molecule 3 ruo 4 nke mmiri.
ụwa dị ka jeff goldblum
Mgbe ị na-agagharị na mgbatị gị, mgbe ị hụrụ onwe gị na enyo ahụ, ihe ị hụrụ bụ akwara gị na ozi ndị ọzọ, yana enwere ụlọ ahịa glycogen na nchekwa mmiri. Ya mere, ị na-ewulite echiche a banyere ihe dị mma maka mọzụlụ gị ma ị chere na nke ahụ bụ oke ahụ m.Ma ihe na-eme mgbe ị kwụsịrị igosipụta ya bụ na ozi ahụ na-agbadata yana n'ihi na ịchọghị glycogen na mọzụlụ gị nlebara anya na mmiri ga-ebelata ma a ga-ahụta gị dị ka akwara na-ele obere, mana ọnụ ọgụgụ protein dị na mọzụlụ gị ka bụ otu mgbe ahụ mgbe mmiri gwụrụ ha, ha ga-aghọ mkpụrụ vaịn dị ka a ga - asị na ha na - agbagha n'otu ọnụ na carbohydrates na-osisi na stachi ma ọ bụ ihe ọ bụla dị na mkpụrụ vaịn.
Ọ ka bụ otu, ọ bụ naanị na ị gbakọtara mmiri mmiri n'ime ya, yabụ ọ dị obere karịa nke ahụ na-eme glycogen gị na mmiri na-eso ya, na-enye ihe dị ka pasent 15 ruo 20 nke mpaghara obe. nke akwara gị na-agafe, kwuo naanị na ị meghere akwara biceps ma bepụ ya n'akụkụ ziri ezi, mgbe ahụ ị nwere dị ka okirikiri ma ọ bụ mpaghara a ka ị tụrụ 15 ugboro, nke ahụ dị ọtụtụ. Na mgbakwunye, ị chịkọtara mmiri site na mbufụt, yabụ na ị nwere ezigbo ezigbo akụkụ nke anụ ahụ a chọpụtara na ị na-eche na ị na-efunahụ, ọ bụ ezie na ahụ ike ahụ ka dị mma, yabụ mgbe m gụrụ ma nyochaa m Anya na akwụkwọ akụkọ? ọnụego nke atrophy muscle? E nwere ihe ọmụmụ ole na ole na-egosi na ihe karịrị izu abụọ ma ọ bụ atọ enwere nnukwu mfu nke akwara n'ihi na ihe ha na-enweghị ike ijikwa bụ mmiri mgbe ndị sayensị ndị ọzọ bịara wee lelee ọrụ ha maka njikwa yana mgbe ịlele data ahụ nke jikọtara n'ụzọ ụfọdụ na waterIt. Kedu ihe ị chere furu efu dị ka akwara? Achọpụtara m ụfọdụ ọmụmụ na-atụ aro na ị ga-atụfu ihe gbasara 0.1-0.2% nke akwara gị kwa ụbọchị, mana buru n'uche na glycogen na mmiri mejupụtara ihe dịka 15-20 nke ogo ahụ gị ma ọ na-agbanwe ngwa ngwa ọtụtụ nzaghachi na mmega ahụ na ọzụzụ D na enwere m mmetụta na ọmụmụ ihe ndị a abụghị eziokwu? Njikwa zuru oke maka nke a, yana ozi na-ewe ụbọchị ole na ole iji gbanwee wee pụọ ọzọ.
O siri ezigbo ike ijikwa Na ihe m hụworo, ọ naghị adị m ka enwere ihe akaebe zuru oke na-egosi na enwere ọtụtụ ọdịiche ma ọlị. Nkọwa m bụ na enweghi mfu akwara na-aga n'ihu n'ime izu abụọ ma ọ bụ atọ, nke ị na-ahụ n'ụzọ anụ ahụ dị ka ihe na-efu bụ naanị enweghị njide mmiri na nchekwa glycogen na obere ozi m na-adịghị ị na-eche dị ka m ugbu a O doro anya na ọtụtụ ihe emeela m ga-egosi gị eserese site n'oge ezumike m, mana aka ekpe Otu a ka m si ele anya n'oge ahụ, yabụ m ga-enye gị obere Nke a bụ otu m si ele ugbu a mgbe m laghachiri, yabụ enwere ike ịtọ ụtọ, mana enweghị m mmasị na ọtụtụ ihe dị iche, nke a bụ ihe m na-ahụkarị n'ihi na ọ bụrụ na m na-agwa gị eziokwu, ana m eme nke a mgbe mgbe anaghị m azụ maka izu ma ọ bụ abụọ, n'ihi ya, m na-ahụ mgbanwe ndị a na-adịghị agbanwe agbanwe ma na-ele ha anya mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na m furu efu, m ga-akọwa sayensị nke kpatara nke ahụ abụghị nnukwu nsogbu na set. Ya mere, anyị kwuru banyere hypertrophy na oke ahụ.
Ugbu a. Anyị na-ekwu maka ike maka ndị mbido Ihe ọmụmụ egosiri bụ na otu ụzọ mmiri mmiri mmiri atọ ma ọ bụ atọ nwere ike ida pasent 10 ruo 20 n'izu abụọ na atọ? Mana ike ahụ nwere ike nwetaghachị ngwa ngwa, ndị nkuzi ga-eji nke a mee ihe maka uru ha n'ihi na ndị egwuregwu na-elu, wee were izu ole na ole ma ọ bụ ọkụ wee laghachi na ọzụzụ kachasị elu karịa ọtụtụ ọnwa. Still ka na-agụ otu ihe ahụ ruo atọ ọgụgụ max ọgụgụ dị ka onye ga-emega ahụ mgbe niile.
Yabụ trajectịzọ gị ogologo oge bụ otu, ị ga - elebara ahụ gị anya nke ọma ma nyekwuo obere ezumike ma karịakwa, ụfọdụ ihe ndị ọzọ na ndụ n’ozuzu ka na - enweta trajectory nke m hụgoro, nke ukwuu junk ahụ dị ka ihe dị mma, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị ebili mmiri ma ha ka na-enwe ọganiihu Ọfụma na mgbe ọ bụla n'ime ndị egwuregwu egwuregwu ike siri ike bụ ndị nọgidesiri ike na-azụ ọzụzụ maka afọ anọ na ọtụtụ nza na ọtụtụ ọmụmụ na-atụ aro na ha ga-adịgide ruo izu atọ nwere ike ịkwụsị igosipụta ike iji kwado ike ha mgbe ọrịa strok ahụ malitere ịgwụ, nke ahụ bụ ozi ọma m chere na m nọ na ịwụ a ka m wee nwalee echiche a iji hụ ma m ka nwere ike ibuli ihe m nwee ike ibuli izu abụọ gara aga. Emere m ọzụzụ dị arọ ihe dị ka ọnwa isii gara aga, mana anaghị m a na ntị n maka ọnwa isii gara aga. My PB bụ 150 pound.
Naanị m na-atụgharị nke a na ike ka ịmara, oh ma gbalịa, ahụrụ m na enwebeghị m ọrịa strok na nwa oge. Anwalere m ya ọzọ izu abụọ gara aga wee banye 100 pound ka m wee nwụọ ntakịrị ike na ndị a onwa isii Mana anyi ga-eleba anya n’ihe m tufuru n’ime izu uka abuo gara aga. Agaghị m omimi otu m kwesiri, ikekwe ka izu abụọ gara aga.
Nwee ụnwu ụbọchị. Gbatia kwa, n'ihi ya echere m na m chere. Ọ dị mma, enwere m obi erughị ala.
Ya mere ọ bụrụ na m ga-enye onwe m ole na ole nyocha m ga-asị ma eleghị anya, ị ga-abanyekwu ntakịrị, mana ị maara na enwere m obi ụtọ na obere mgbidi ndị ọrụ agagharị. Enwerem nke gi na mysignmy dika itufu ya na ututu a dika Suraj? N'ihi na ọ dị m ka okwu m nwere ike ọ gaghị abụ nkwupụta okwu nke mere na m ga-eji mmegharị aka niile, m ga-eme ya n'ụzọ a iji gosi gị ma gosi gị ihu igwe UK. Lee ndị ọjọọ ụmụ nwoke a Ihe kpatara na ọbụlagodi na ị tụfuo oke akwara You nwere ike nwetaghachị ya ngwa ngwa maka m bụ maka abalị m - Mkpụrụ ndụ nwere isi ala Isi ihe bụ ntọala iwu nke mkpụrụ ndụ - o nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ihe omuma ma nyere aka na njikọta protein, dị ka nke ahụ mgbe ị na-emega ahụ ị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke nuclei na sel gị yana nke ahụ na - enye aka na ncheta ahụ ike, ọ na - eme ka ọ dịrị gị mfe, ọbụlagodi na ị ga - efufu obere akwara, iji nwetaghachi ya ngwa ngwa .
Ihe dị mma bụ na enwere ọmụmụ ihe na-egosi na mmụba m na akwara gị nwere ike ịdịru afọ iri na ise, ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike mgbe m na-achọta ọrụ, ị ga-ewere obere oge gị, egbughị m nkwa m kwere gị na ị ga - eme ka ụbụrụ m dị elu, ọ ga - adịrị gị mfe ịmegharị akwara ndị ahụ. Aga m ekwu nke a mgbe ị laghachiri na mgbatị mbụ gị, ọ nwere ike ịnwe mmụọ dị ka hel, ọ ga-adịkwu oge. Ma ọ bụ nwa oge n'ihi ihe abụọ.
Nke mbu bụ na ahụ ike gị na-agbada ngwa ngwa, vo2 max gị nwere ike ibelata ọsịsọ ngwa ngwa, yabụ enwerekwa ike obi gị. Nnyocha egosiwo na oge ị ga-agwụ ike dị mkpụmkpụ, a ga-enwe mmetụta nke oke ahụ ike na ọnwụ glycogen na mọzụlụ gị maka ike maka mgbatị ahụ, ntakịrị ntakịrị ahụ ike obi na ọ nweghị nke nwere ike ime gị na-eche na ị laghachila n'ọganihu gị, mana ihe a niile ozugbo ịmalite ịmị carbs. Mana n'ime 2 na 3 na - esote mgbatị ahụ, ị ​​ga - adị mma ma dịkwa mma ọzọ.
Kedu nke m ga - eme Ọ bụrụ na ị rie nke pere mpe, ị nwere ihe egwu nke ahụ gị n'iji mọzụlụ maka ike. Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa ị listena ahụ gị ntị ma ghara belata calorie nke ọma. Ngalaba na-esote, Kedu Fuck m chere na ọ dabere n'ọtụtụ otu ị si ebi ndụ gị na nke a ma n'ezie ahụ gị dị mma na ya n'onwe gị imeghari na ọ nwere mmasị ịme ihe dị ka nchekwa.
Ọ naghị enwe mmasị mgbanwe siri ike. Kedu ihe ga - eme ka ị nweta abụba bụ njikọta nke anaghị emega ahụ na ịingụbiga mmanya oke oge? Dị ka otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ anaghị ewere ọtụtụ uru abụba ma enwere ọmụmụ ihe na-egosi na ọ na-emekarị mgbe ọ karịrị oge kwesịrị ekwesị dị ka otu izu ruo ụbọchị iri mgbe ị na-eri nri oge niile ọ dị gị ka ị nwere ike itinye obere abụba, mara na enwere ike ịnweta gas, ọkachasị mgbe anyị na-apụ nri dị iche iche ka ọ bụrụ gas naanị yana otu n'ime ihe ị ga-echeta mgbe ịchọrọ ịga ma nwee obi ụtọ onwe gị. Mana ụjọ na-atụ gị gbasara egwuregwu a.
Ọ bụrụgodi na ị riri oke nri, kwuo 100, 100,000, ma ọ bụ puku calorie, nke ahụ apụtaghị na otu puku kalori abanyela na nchekwa abụba yana na ịkwesịrị imeju ya. N'echi ya, ihe dị ka otu puku calorie na-eme bụ na ụfọdụ n'ime ike ahụ ga-abanye na mgbaze. Yabụ mmetụta ọkụ gị na nri ga-abawanye ma ọ bụrụ na ị tụlee mkpokọta ike oriri kwa ụbọchị.
Ya mere, mgbe ị rie ntakịrị karịa, ị nwere ike ịnwe ntakịrịkwu nkwenye, ị gaghị amatadị na ahụ anyị na-eji ntakịrị ike na-eji ntakịrị ume karịa ma ahụ anyị anaghị ewere ike karịrị ike niile a na-eme eji, ka na-arapara nri ndị ahụ m ga-erikarị, mana anaghị m eri nri ọzọ. Ka anyi kwuo calorie 300 mgbe m na-emega ahụ nke ukwuu n'ihi na ahụ m achọghị ume ahụ, ọ na-eme m n'echeghị ya eche, mana ọ bụrụ na ị bụ onye ọnyà, nke a nwere ike ịbụ ihe ị tụkwasịrị obi kwesịrị ịdị maara na ihe iji dozie ma ọ bụrụ na ị nwere nchegbu gbasara egwuregwu a, ọ bụ ezie na ahụ gị nwere ike ọ gaghị eji ike dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị naghị emega ahụ. Echere m na ọ bụ otu ihe ahụ.
Ọ dị mkpa ka ị ghara imebiga ya ókè. Aga m eri ya n'ihi na mgbe ahụ, dịka m kwuru, ahụ gị nwere ike ịbanye n'ime mọzụlụ maka ike ma ị chọghị nke ahụ. Wantchọrọ idebe ahụ gị dị oke mma ma dị elu nke mere na metabolism gị na-adị mma ma dị elu, m na-ekwu, ọbụlagodi na enwere uru abụba Ọ bụghị njedebe nke ụwa ihe kachasị mkpa maka m na m nwere olile anya ma ọ na-abịa Ndụ m ọ dị mkpa? Ya mere, anaghị m ekwusi okwu ike banyere ụdị ihe ndị ahụ, ugbu a na numerotope nke atọ, kedu ihe bụ ọnọdụ gị na mmụọ gị.
Echere m na enwere ọtụtụ elele na ịghara igosipụta dị ka ị na-enweta ezumike nke uche oge ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị emega ahụ ma ị na-eji ya maka ọrụ, ihe niile ị ga - eme bụ ibute ọrụ ahụ ụzọ ma mee ihe ozo. Mmega ahụ na-eme ka ị nọrọ n'oké nrụgide na nrụgide. Ihe siri ike ị na-azụ, oge ị ga-eji zuo ike, ka ndị mmadụ na-eche na m na-azụ dị ka elekere isii na elekere asatọ kwa izu na tii, naanị m na-azụta awa atọ ma ọ bụ anọ n'ihi na mgbe m zụrụ m, m na-azụ nnukwu ike ma achọzie m naanị nwee ezumike a ma enwere m ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-aga ma ọ bụrụ na ahụike zuru oke dị gị mkpa, mgbe ahụ chee echiche gbasara anụ ahụ na nke uche dịka akụkụ uche dị oke mkpa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị mkpa karịa amaghị m.
Enwere m ụdị unyi, mana echere m na ọ na - ewe iwe oge ụfọdụ, yabụ echere m na ị ga - ezumike naanị iji zuo ike n'ụzọ ị na - eche ma nweta ihe ụfọdụ, dị ka, nwere ike inye aka na-enye aka mgbe a gụsịrị akwụkwọ. 'Arụrụ m ọrụ, mana amaara m na nyocha m n'ihi na nke ahụ bụ ihe m kachasị mkpa ma echere m na o were m oge ịghọta na enwere oge mgbe m na-enweghị ike ịzụ ma enweghị m ike ịzụ n'agbanyeghị agbanyeghị m na-echegbu onwe m banyere ma m nwere ike ịzụ ma ọ bụ na agaghị m eme, ọ gbakwụnyere nrụgide nke m kwesịrị ileghara anya n'ihi na ọ bụrụ na m nwere oge iji belata nrụgide ọzụzụ m ga-enwetarịrịrịrịrị n'ihi na m laghachiri mmega ahụ zuru ike kama ịme ihe m bụ. Ana m etinye oge niile na-echegbu onwe m na ụjọ na nrụgide na enweghị m mmasị na ya ma ọlị. N'ezie, ọ nwere ike mee ka ọ ka njọ ka enwere uru ọ bụla na ịghara ịmega ahụ, echekwara m na ọ bụrụ na m ka jiri oge ụfọdụ kweta n'eziokwu na m nọ na ọzụzụ, m ga-anụrịrị oge m nwere onwe m, ọzụzụ m ga-eme n'ezie enweela mma.
Mana ịmara, ihe ndị a niile bụ ihe ị hụrụ n’azụ. Yabụ na anụ ahụ adịghị njọ. Muscle naghị enwe ahụ ike na ngwa ngwa.
Anyị anaghị enwetaghachi ike anyị ngwa ngwa ọ gwụla ma ị na-eri oge niile maka izu abụọ ị gaghị ahụ nnukwu ihe dị iche na nke atọ, ọ nwere ike ịdị mma maka ahụike ọgụgụ isi gị ma ọ bụrụ na ị kwe ya mgbe ahụ ị nwere ike melite mgbatị gị mgbe ị laghachiri ya. Enwere olile anya na edemede a gha eme gi obi uto n’oge ozo ichoro izu ezumike izu abuo. Daalụ maka ikiri.
Echere m na ị masịrị ya. Nye m nnukwu isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ị masịrị ya wee kụọ bọtịnụ ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụkwuo. Ahụrụ m unu n'anya, anyị ga-ahụkwa gị oge ọzọ. ka ọ dị
Ugboro ole ka ị kwesịrị iwepụ otu izu pụọ na mgbatị ahụ?
A na-ekwusi usoro sistemụ neuromuscular dum ike, yana ịrụ ọrụ nrube isi site na ọzụzụ ọzụzụ. Ihe dị mkpa bụ na ahụ gị chọrọ ogegbanyụọihe dị ka ọ bụla 8-10izu. Individualsfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịchọ mgbakeizuỌzọmgbekarịa nke a na ụfọdụ oberemgbe, ma 8-10izubụ ezigbo ndu ndu.23 jul. Ọkt 2018
Ọ ga-efunahụ m ma ọ bụrụ na m were otu izu ezumike?
Ọ bụrụgịnaraole na oleizu ole na olesite na mmega,nke giike ike agaghịnaraọtụtụ ihe kụrụ. Anyị maara na skeletal muscular ike na-adịgide adịgideiheotu n'ime otu ọnwa nke anaghị emega ahụ. Otú ọ dị, dị ka e kwuru n'elu, ndị na-eme egwuregwunwere ikebidona-efumọzụlụ mgbe atọ gasịrịizuarụghị ọrụ.1 nov. Ọkt 2018
Kedu ihe na-eme, ụmụ okorobịa? Sean Nalewanyj, na www.SeanNal.com, na n'isiokwu a taa achọrọ m ikpuchi isiokwu nke mfu ọnwụ n'oge ezumike.
Eleghi anya ị nwere mmerụ ahụ, ma eleghị anya ị na-eme njem, ikekwe ị nwere ihe ezinụlọ ị ga-aga, ma eleghị anya ị ga-achọ obere oge ezumike iji lekwasị anya na ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, ogologo oge ọ ga-ewe n'oge oge arụghị ọrụ iji tufuo oke ahụ ike. Nke a bụ n'ezie okwu dị oke mkpa m chere n'ihi na ọtụtụ ndị na-eji usoro ahụike ha eme ihe nke ọma na-enwe nrụgide gabigara ókè site n'echiche nke ịhapụ mgbatị ha. N'eziokwu, ọ naghị abụkarị nsogbu dịka mmadụ nwere ike iche.
M na-eche banyere ya dị ka ị maara, n'ezie na-adịghị agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na agbaghara m mgbatị ahụ, ọ ga-adị m ka m furu efu, egwuregwu m niile ga-adapụkwa n’ahụ m. Mana ka m nwetara ahụmịhe karịa ma mee nyocha karịa, amụtara m na nke a abụghị eziokwu, ọ bụrụ na ị bụ onye na-asọmpi asọmpi na oge a kara aka maka asọmpi ma ọ bụ mmemme ọ ga-adị iche.
Na-efu oge ọzụzụ nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma n'okwu a, mana maka onye ọ bụla na-azụ ọzụzụ na oge ha n'efu, ọ na-ewe ezigbo ogologo oge maka ịda mba dị mkpa ga-eme. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ ga-eme, ị ga-eme ya. Akwara na ike gị furu efu ka ga-adịghachi ngwa ngwa oge ịlaghachi mgbatị ahụ.
Ezubere nke a iji gbaa onye ọ bụla ume ịhapụ ọzụzụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwulite ahụ dị elu, ogologo oge na-agbanwe agbanwe dị oke mkpa. Mana oge ụfọdụ ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ị nweghị nhọrọ, yabụ, achọrọ m ịkọwa ihe ị nwere ike ịtụ anya.
Ya mere, iji nye otu azịza a kapịrị ọnụ ebe a, ka anyị kwuo na ị kwụsịrị ụdị mmega ahụ niile ma na-eri nri gburugburu ebe ị na-eme ka calorie gị na-arụ ọrụ ma ị na-enwetakwa protein, ọ dịkarịa ala ihe dịka 0.8 gram kwa kilogram nke arọ ahụ kwa ụbọchị, nke bụ n'ezie ọ dịghị onye nnukwu ego bụ. Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụrịrị na ị ga-arụ ọrụ izu abụọ zuru oke.
Ọ bụrụ na nri gị bụ ihe nzuzu ma ị na-eri nri kalori ma ghara inweta protein zuru oke, ọ ga-eme ngwa ngwa. Ma ọ bụrụ na ị ka na-eri ezigbo nri dị mma, ihe dị ka izu abụọ, nke ahụ bụ ihe ị na-ele, nke ahụ bụkwa ka usoro ahụ wee nwee ike ịmalite. Yabụ nke a bụ ihe dị mkpa iburu n'uche ebe a.
N'ime izu abụọ usoro a ga - ebido, mana ọ ga - adị nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ site na izu ruo izu. Yabụ, ọbụlagodi izu abụọ, izu atọ, izu anọ, ma ọ bụ karịa, ọ bụrụ na nri gị ziri ezi, ị ga-atụfu ahụ ike na ume n'oge ahụ, mana imirikiti uru ị ga-enweta ga-adị mma ọ bụrụhaala na ị zụọla ọzụzụ maka ezigbo oge ma nweta ụfọdụ uru siri ike ruo ugbu a. Otu echiche dị ezigbo mkpa iji ebe a bụ ichetara onwe gị na ọ bụrụ na ihe niile ị na-eme bụ ma eleghị anya otu izu ma ọ bụ abụọ site na mgbatị ahụ, ọ dị ka ịhapụ ezumike.
Really gaghị agaghachi azụ. Basically na-anọ otu ebe. Yabụ enweghị ezigbo ihe kpatara eji arụbiga ọrụ ókè ma ọ bụ nrụgide.
Ihe ị nwere ike ịchọpụta bụ na ị yighị ka enyo ma ọ bụ kọwaa ya na enyo. Nke a bụ n'ezie ihe jidere anya m mgbe anyị na-ekwu maka ụbọchị iri ruo iri na anọ na mgbatị ahụ na-enweghị mgbatị ahụ. Otú ọ dị, nke a abụghị nsonaazụ nke oke akwara akọrọ, naanị mbelata nke mmiri na glycogen echekwara na akwara na obere mbufụt na anụ ahụ ebe ọ bụ na ị naghị ebuli ibu.
O yikarịrị ka ị ga-adị ntakịrị karịa na-ete nwayọ na ntakịrị okwu iwe. N'ịghara ịkọwa, ihe gbasara mmụọ nwere ike ịrụ ọrụ ebe a, n'ihi na ọ dị mfe ị ga-esi ghọta echiche gị banyere ahụ gị dabere n'echiche gị. Yabụ ọ bụrụ n ’ị dị obere na isi gị maka na ị naghị emega ahụ, mgbe ahụ enwere ike ịbụ na mgbe ị lere enyo ahụ, ị ​​ga-ahụ ahụ dị obere na isi gị.
Ya mere, buru nke ahụ n’uche. O nwere ike ịbụ naanị uche gị na-egwu aghụghọ na gị ruo n'ókè ụfọdụ. Ma, ee, ahụ gị nwere ike ile obere ntakịrị, mana ọ nweghị ihe ga-eme ka ụjọ tụgbuo gị n'ihi na ọ bụghị n'ezie ụfụ nke ahụ ike.
Ọ na-agbanwekwa ngwa ngwa, ọ bụrụ na ị ga-ewe izu abụọ ma ọ bụ karịa karịa ezumike, ike gị nwekwara ike ịgwụtụ. Ọzọkwa, nke ahụ anaghị ekwe gị nkwa, mana dabere na nri gị na ihe ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdalata dị ka rep ma ọ bụ abụọ na ụfọdụ mmega ahụ, ma eleghị anya, ise ma ọ bụ iri pound azụ na ndị n'ezie nnukwu compound mmegharị nke mbụ mgbatị. Ma ọzọ, nke a abụghị nsonaazụ nke anụ ahụ anụ ahụ n'ezie, mana ọ na-abụkarị naanị mmezigharị akwara.
Cheta na ike abughi nani ihe ike nke ike, kamakwa obu ikike mmuta. Yabụ, ọ bụrụ na ịgabeghị mgbatị ahụ ruo izu ole na ole ma ọ bụ karịa, ahụ gị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na mmegharị ndị a n'ihi na ị naghị eme ha oge niile, n'ihi nke a, ike gị nwere ike ibelata ngwa ngwa. Iji chịkọta ihe niile, izu abụọ ga-ebido n’emeghị ihe ọ bụla na nkwarụ akwara.
Ọ ga-eji nwayọ nwayọ belata ogo ya site na izu ruo izu, mana nke ahụ abụghị ezigbo mgbu akwara. Ike gị nwere ike ịdata ntakịrị, dị mfe, mana nke ahụ esiteghị na nkwarụ ahụ ike. Ya mere ọ bụrụhaala na nri gị nwere ezi uche, echiche maka mgbatị ahụ dị mkpirikpi adịghị njọ ma ọlị.
fitbit na ịgba ígwè
Ihe ọzọ dị oke mkpa ị ga-atụle ebe a bụ na n'ihi ihe a maara dị ka ncheta akwara, mfu ọ bụla nke akwara ị na-eme n'oge ahụ ga-alaghachi ngwa ngwa karịa ka ịchọrọ iji merie. Yabụ na-abanyeghị na nkọwa ole na ole, mgbe ị na-eme ahụ ike, ahụ gị na-agbakwunye ụyọkọ mkpụrụ ndụ na mkpụrụ ndụ akwara gị, yana gburugburu nuclei ahụ, obere mkpụrụ ndụ satịlaịtị na-ewuli elu. Ọnụ ọgụgụ nke etiti dị n’ime akwara bụ otu n’ime ihe ndị bụ isi a ga-eji hazie otu ọ ga-esi buru.
Ma mgbe ị gafere usoro ọzụzụ, nke a bụ ihe na - eme: sel satịlaịtị na-akpọnwụ, mana mgbakwunye ndị ọzọ na-anọ ebe I nwere ike wughachi akwara furu efu ngwa ngwa n'ihi na ntọala ntọala ahụ ka dịkwa. Mana isi okwu bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta oge site na mgbatị ahụ, echegbula onwe gị. Ọ ga-ewe gị izu abụọ zuru oke ịmalite ịgwụ ma ọ bụrụ na nri gị adịla mma.
Site mgbe ahụ gawa, ọ bụ usoro nwayọ nwayọ ma ị ga - enwetaghachi ihe ị tufuru ngwa ngwa. Iwuli ozu di uku bu ihe mmepe ogologo oge. Ọ bụ banyere nnukwu foto na obere micro-nkwụsị n'oge usoro a agaghị abụ nnukwu ihe.
Yabụ, enwere m olileanya na nke a nyere aka. Jide n'aka na ị pịa bọtịnụ Dị ka, hapụ ikwu ma denye aha iji mara banyere ọzụzụ, nri na-edozi ahụ na mgbakwunye nri na-edozi ahụ ma tufuo abụba dị ka o kwere mee site na ịpị obere akara ngosi dị n'elu ebe a Pịa na ihuenyo ma ọ bụ gaa www .BTBluePrint.com.
Njikọ ahụ dị na ala nke igbe nkọwa ahụ. Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị dị na www.SeanNal.com.
Soro m na Facebook na Instagram. Njikọ maka nke ahụ dị na igbe nkọwa. Daalụ maka ikiri ụmụ okorobịa.
M ga-ekwu okwu ọzọ n'oge na-adịghị anya Mụ na gị.
Ga-emega mgbatị ahụ otu izu?
Nye ụfọdụ, aizu pụọ na mgbatị ahụpụrụ iyi ihe na-adịghị mma.Izu abụọnwere ike ịdị ka ịjụ okwukwe. Agbanyeghị, n'eziokwu, ọ bụnwere ikebụrụ isi ihe ị ga-eji nwee ike dị ukwuu. Mgbe otu ma ọ bụizu abụọ ezumike, ị gaghị ata ahụhụ nkenke n'ike, ike, oke ahụ ma ọ bụ oke - ma ọ bụ hụ uru pụtara ìhè na abụba ahụ.June 9. 2016 Nọvemba
Enwere m ike ị nweta uru mgbe izu 2 gachara?
Mgbeotu ma obuizu abụọ ezumike, ị gaghị ata ahụhụ nnukwu ike, ike, oke ma ọ bụ oke - ma ọ bụ gbaa akaebe ọhụụnwetan'ime abụba ahụ. Ọ na-ewekwa ogologo oge iji hụ ndalata ọ bụla nke ike ikuku, ume ma ọ bụ VO2 max.June 9. 2016 Nọvemba
You ga-atụfu akwara mgbe izu 2 gachara?
N'ikwu ya, Lee na-agbakwunye ma ọ bụrụgịna mberede na-eri nri kalori,ị nwere ike ida mọzụlụuka ngwa ngwa dika mmadu kaizu abụọ. Ọna-emeakwadola ka ị belata calorie dị egwu, dịka ahụ malitere iji yaakwaradị ka isi iyi ike.Jul 20. Dec 2019
Mgbe ị ga-ewepụ otu izu na mgbatị ahụ?
Mgbe ọ bụla ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ nke mmega ahụ siri ike, tụlee ezumike izu zuru ezu iji lekọta ahụ gị. Lee ihe kpatara ya. Onye a nwere ike iyi ka ọ nweghị nsogbu, mana iwepụ otu izu na-enye gị ohere ịgbake ma n'ụzọ anụ ahụ ma n'uche.
Kedu mgbe ị ga-ewe otu izu maka uto ahụ?
Iweghachite akwara - Wepụ otu izu iji Gbuo Mgba Ọhụrụ Ọhụrụ! Iji mee ka uru ahụ dịkwuo elu, ịkwesịrị iji ezumike ezumike kwesịrị ekwesị kwa oge. Kpọmkwem m na-ekwu maka ikwu okwu otu izu zuru ezu ịhapụ ịrụ ọrụ kpamkpam. Principlekpụrụ a pụtara n'ụzọ nkịtị na ị na-eme obere ma nweta ọtụtụ!
Ọ dị mma iwepụ otu izu na?
Amarillas kwuru, sị: 'izu izu ike bụkwa nnukwu ụzọ iji gbanwee usoro ọ bụla nke mmemme. 'Ọ na-enye mmadụ ohere ịdị na-arụ ọrụ ugboro ise ma ọ bụ karịa kwa izu. Nkụzi uche na nke anụ ahụ na-enyekwara [ndị mmadụ] aka ịlọghachi! '